नेपाल आज | न्युज २४ले चोर्यो बौद्धिक सम्पत्ति, रवीलाई देखाएर गोरखधन्दा गर्न नपाउँदा जोशी आक्रोशित [प्रमाणसहित]
योसँगै कार्यक्रमको टे«डमार्कका विषयमा ठुलै समस्या हुने आशंका गर्न थालिएको छ । पत्रकार प्रेम वानियाँले पनि यो विषयलाई आंकलन गरेका छन् । लामिछाने र टेलीभिजनका तर्फवाट तयार पारिएको विज्ञापनलाई सामाजिक संजालमा राखेर उनी लेख्छन्–‘म चाहन्थें, यतिसम्म द्वन्द्व नभइदिएको भए हुन्थ्यो ! तर अब त यो कार्यक्रम नै कानुनी विषय बन्न पुगेछ ! मेरो साथी रवी र ‘मेरो’ टीभी न्युज २४ दुबैको जय होस् । जय स्वाभिमान !’
हुन त कार्यक्रमको ट्रेडमार्क रवीको स्वामित्वमा रहेको ‘रुचि एण्ड रिया प्रोडक्सन प्रालि’को नाममा रहेको वुझिएको छ । तर, फोन नउठाउँदा रवीसँगको विषय प्रष्ट हुन सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि टेलीभिजनले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएपछि जोशीमाथि वौद्धिता चोरीको आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।
कानुनतः कसैले आफनो वन्द ब्यापार वा कारोवारको ट्रेडमार्क गलत तरिकाले प्रयोग गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने र सो कसुरसँग सम्वन्धित सवै मालसमान जफत हुने ब्यवस्था छ । यसैगरी ऐन वमोजिम दर्ता भएको कुनै पेटेण्ट, डिजाईन वा ट्रेडमार्कको सम्वन्धमा कसैले ऐनको उलंघन गरेवाट पेटेण्ट, डिजाईन वा ट्रेडमार्कको दर्तावालाले वास्तविक रुपमा सहनु परेको नोक्सानीको उचित रकम सो उलंघन गर्ने ब्यक्तिवाट दर्तावालालाई हर्जनाको रुपमा भराई दिन सक्ने समेत कानीनु ब्यवस्था छ ।
अर्कोतर्फ रवीलाई लिएर टेलिभिजन मालिक जोशी आक्रोसित हुन थालेका छन् । उनले रवीलाई संकेत गर्दै ‘सर्पलाई दूध खुवाएर पालेछु’ भन्दै निकटका ब्यक्तिहरुसँग टिकाटिप्पणी गरेको सुनिन थालेको छ । हुन त उनीमाथि रवीको इमेजलाइ देखाएर ब्ल्याकमेल गर्ने तथा लाभ लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । साना–तिना अनियमिता कार्यक्रममार्फत देखाउने तर ठुला अनियमिततामा बार्गेनिङ्ग गर्ने गरेको आरोप सिङ्गो न्यूज २४ माथि छ।
जोशी मिडिया मालिक भए पनि प्रायः मिडियामा आउन रुचाउँदैनन् । आफु नचिनिएर अन्य सञ्चारकर्मीमार्फत काम लिनु उनको विशेषता हो भन्ने गरिन्छ। सञ्चारकर्मी प्रति उनको हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक नरहेको टेलिभिजनकर्मीहरु नै वताउँछन् । उनले संचारकर्मीलाई कामदारको रुपमा मात्र लिने गरेको वताईन्छ।
जानकारी अनुसार जोशी इराकमा १२ नेपाली मारिएको घट्नासँग पनि सम्वन्धित ब्यक्ति पनि हुन। उनी ति नेपालीलाई इराक पठाउने मेनपावरका मालिक समेत भएको वताईन्छ। हाईड्रो पावरर्फ पनि माफियाको नाम कमाएका जोशीले मिडियालाई आफ्नो रक्षाकबजको रुपमा दुरुपयोग गर्ने गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ ।